Ny fomba mahaliana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny cursor nampidirin'i Apple tao amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny fomba mahaliana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny cursor nampidirin'i Apple tao amin'ny iPad
Apple dia manana ny plus sy minus mba hampiharana ny totozy amin'ny iPad. Na dia nanohana ny ho avy tsy misy peripheraly aza izy, ny zava-misy amin'ny fandefasana tranga amin'ny klavie sy ny trackpad dia miafara amin'ny fipoahana ireo fanambarana ireo. Miasa tanteraka ny totozy ao amin'ny iOS 13.4 ary nohavaozina ihany koa mba hanomezana endrika sy fiasa mahaliana izay tsy mahatonga antsika hanadino fa tena miatrika fitaovana noforonina mba hahay handanjalanja tokoa isika. Ity no famolavolana endrika mahaliana momba ny bokotra totozy izay notanterahin'i Apple hanatanterahana azy amin'ny iPad.
Ankoatry ny zava-misy fa ny tondro dia boribory, lehibe loatra amin'ny fahitako azy, hitantsika ny maha-hafa ny tetezamita amin'ny zavatra mbola tsy fahita teo amin'ny rafitra misy ireo toetra ireo. Rehefa afindrao amin'ny bokotra iray ny totozy, dia manasongadina azy io ary mampiseho amintsika interface hafa, ka manjary manjavona ilay faribolana izay maneho ny fitifirana. Ary misy dikany satria ny habe sy ny loko dia mety hahatonga antsika hanary fampahalalana sasany, indrindra satria kely ny efijery iPad, indrindra amin'ny maodely 10,2-inch. Eto ambany ianao dia afaka mahita ny horonantsary Eduardo Arancho ao amin'ny Twitter izay anehoana mazava ny tianay holazaina:
Ary izao no nisafidianan'ny Apple hampifangaro ny totozy hampahatsiahy antsika fa tsy miatrika PC isika, manohy miasa miaraka amin'ny iPad izahay. Toa fomba tena izy io amiko ary indray mandeha amin'ny fomban'ny orinasa Cupertino afaka miatrika an'ity fanamby vaovao ity, ilay toa ny famonoana azo antoka tamin'ny iPad tamin'ny PC, tetezamita toa tsy hifarana mihitsy ho avy nefa azo antoka fa eo an-jorony noho ireo trangan-dàlana vaovao izay tena tian'ny besinimaro, inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny fomba mahaliana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny cursor nampidirin'i Apple tao amin'ny iPad
Pirates of Silicon Valley: Izany no nahaterahan'i Apple sy Microsoft
Ny iPad Pro vaovao dia 1% haingana kokoa noho ny maodely 2018